ဖိအားတှကေနြတေဲ့ ဆိုးလျရှားကို ကယျတငျမှာ ရျောနယျဒိုလား? ဘရူနိုလား? မှတျတမျးအရ ကယျတငျရှငျအစဈက လငျဂတျဖွဈနေ – Play Maker Sports Journal
အိုလီဂနျးနားဆိုးလျရှားဟာမနျယူအသငျး ရလဒျကောငျးဆကျတိုကျရယူနိုငျရနျ ရုနျးကနျနရေမှုနဲ့အတူဖိအားမြားနှငျ့ရငျဆိုငျနရေပါတယျ။ဆိုးလျရှားကို ဂကျြစီလငျဂတျကယျတငျပေးနိုငျမလားကွညျ့ရပါမယျ။
လီဗာပူးတိုကျစဈမှူးဖာမီနိုက၁၂၆မိနဈကစားထားရာမှာ၃ဂိုးသှငျးထားနိုငျပွီး၄၂မိနဈကစားတိုငျးဂိုး/ဖနျတီးမှု ပွုလုပျထားနိုငျပါတယျ။တတိယနရောမှာလငျဂတျကမနျယူအတှကျ၁၃၆မိနဈကစားထားရာမှာ၂ဂိုးသှငျးပွီး၁ကွိမျဖနျတီးကာ၄၅မိနဈကစားတိုငျး ဂိုး/ဖနျတီးမှုတဈကွိမျပွုလုပျထားနိုငျပါတယျ။
ဖိအားတွေကျနေတဲ့ ဆိုးလ်ရှားကို ကယ်တင်မှာ ရော်နယ်ဒိုလား? ဘရူနိုလား? မှတ်တမ်းအရ ကယ်တင်ရှင်အစစ်က လင်ဂတ်ဖြစ်နေ
အိုလီဂန်းနားဆိုးလ်ရှားဟာမန်ယူအသင်း ရလဒ်ကောင်းဆက်တိုက်ရယူနိုင်ရန် ရုန်းကန်နေရမှုနဲ့အတူဖိအားများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဆိုးလ်ရှားကို ဂျက်စီလင်ဂတ်ကယ်တင်ပေးနိုင်မလားကြည့်ရပါမယ်။
လီဗာပူးတိုက်စစ်မှူးဖာမီနိုက၁၂၆မိနစ်ကစားထားရာမှာ၃ဂိုးသွင်းထားနိုင်ပြီး၄၂မိနစ်ကစားတိုင်းဂိုး/ဖန်တီးမှု ပြုလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။တတိယနေရာမှာလင်ဂတ်ကမန်ယူအတွက်၁၃၆မိနစ်ကစားထားရာမှာ၂ဂိုးသွင်းပြီး၁ကြိမ်ဖန်တီးကာ၄၅မိနစ်ကစားတိုင်း ဂိုး/ဖန်တီးမှုတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။